जब दुई दिदी-बहिनी दाजु-भाइ बनेर फर्किए… - Kohalpur Trends
जब दुई दिदी-बहिनी दाजु-भाइ बनेर फर्किए…
एजेन्सी । गुजरातका दुई दिदीबहिनी दाजुभाइ बनेर फर्किएका छन् । पञ्जाब प्रान्तमा गुजराज जिल्लाको सोनबडी गाउँको द्वितीय वर्षका छात्र बशरा आबिद र वाफिया आबिद दाजुभाइ बनेर फर्किएका हुन् । अहिले बशराकाे नाम वलीद र वाफियाकाे नाम मुराद राखिएकाे छ ।
अप्रशेनपछि वलीदले भनेका छन्, ‘इस्लामादबाट केटा बनेर गुजरात पुगेको छु । यस कुराले मलाई यति धेरै खुशी छ, म बयान गर्न सक्दिनँ । मलाई सानैदेखि केटीको लुगा मन पर्दैन थियो । मेरो काम र बानी केटाजस्तै थियो । मेरा सात बहिनी दुई जना भाइ पाएर निकै खुसी छन् । मेरो भाइ मुराद पनि खुशी छ ।’
‘चौधरी भन्छन्, ‘हामीले दुई जनाको अलग–अलग अपरेशन गरेका हौँ । वलीदको अपरेशन २० सेप्टेम्बरमा गरिएको थियो । उनलाई त्यसपछि आइसीयूमा राखियो । जब अपरेशन सफल भएको सुनिश्चित भयो । त्यसपछि हामीले १० अक्टुबरमा मुरादको अपरेशन गरेका थियौँ ।’ उनका अनुसरा यो अपरेशन ६ घण्टासम्म चलेको थियो जसमा समय–समयमा कयौँ डाक्टर सामेल भएका थिए । दुई भाई २१ अक्टुबरमा घर फर्किएका थिए ।
डा। चौधरीका अनुसार यो बिमारी निकै कममा देखिन्छ । लगभग ०.५ देखि ७ प्रतिशतमा । उनी भन्छन्, ‘यो केसमा दुवै केटी नै थिए । तर, उनीहरुमा केटीको कुनै विशेषता नै थिएन । उनका अनुसार निश्चित उमेर पुगेर पनि उनीहरुमा महिनावारी सुरु नै भएको थिएन । जब उनकी आमाले उनको गुजरातस्थित अस्पतालमा जाँच गराइन् तब उनीहरुलाई पीआईएमएस चिल्ड्रेन अस्पतालमा रिफर गरिएको थियो ।
डा। चौधरीका अनुसार अपरेशनअघि र पछि उपचारको आवश्यकता पर्छ । अपरेशनअघि महत्त्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक परीक्षण र काउन्सिलिङ गरिन्छ र अपरेशनपछि केही समय औषधीको माध्यमबाट हर्मोन पैदा गरिन्छ ।
Previous Previous post: आखिर किन मृत महिलासँग बिवाह गरियो ?
Next Next post: एउटै मण्डपमा दुइटी बेहुलीसँग बिहे : एउटी प्रेमिका अर्की दुलाहको परिवारले रोजेकी
नवीनतम खोज गर्नेलाई दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ५० लाखसम्म ऋण
१७ मंसिर, काठमाडौं । तपाईंसँग नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता छ, तर पूँजी जुटाउन नसकेर परियोजना अगाडि बढाउन सक्नु भएको छैन ? त्यस्तो हो भने…